Baranbarada oo wadamada qaar loo isticmaalo daaweynta cuduro caana iyo tan ugu yaab badan oo maraq laga sameeyo - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Baranbarada oo wadamada qaar loo isticmaalo daaweynta cuduro caana iyo tan ugu yaab badan oo maraq laga sameeyo
Markaad xasuusato magaca barabaro ayaa waxa markiiba aad xasuusanaysaa wasakh iyo meel nadaafada ka fog sida kushiinada, musqulaha iyo meelaha ka sii daran oo Baranbaradu ku nooshahay. Musqulaha Somalida ayaa ka mida meelaha soo jiita Baranbarada. Hadaba cayayaanka sidaasa ayaa la baaray lana ogaaday in uu leeyahay faaiidooyin badan oo xaga caafimaadka ah.
Culimada wax baara ayaa is waydiinaya sida Baranbaradu ugu nooshahay wasakhda hadana ayna waxba ku noqon cudurada buuxa inkastoo iyagu ayna aaminsanayn awoodaha Rabi. Baranbarada ayaa jirkeedu leeyahay difaac xoogan oo kaliya cudurada ay ku nooshahay.
Wadanka Shiinaha ayaa maraq ka sameeya Baranbarada isla markaana ku daaweeya cuduro caana sida gaastariga mindhicirada iyo gubashada taas oo keenaysa in dad badan ka shikiyaan daawooyinka laga keeno Shiinaha inkastoo xilliyada mar la isticmaalo.
Maraykanka ayaa iyaguna gobolada qaar la isticmaali jiray shah laga sameeyay Baranbarada inkastoo aad garan karto inta Baranbaro ee la dilay si loo sameeyo koob shaaha oo qof cabo.
Dhinaca kale qiimaha Baranbarada ayaa kor u kacay dalkaasi Shiinaha kadib markii dad badan ogaadeen in cayayaanka lagu arkay faaiido. Waxa jira nin u samaystey warshad oo markii ugu dambeeyay ku hayay in gaaraysa 2 milyan oo Baranbaro ah.
Culimada dhinaca dadka naafada ah ayaa iyaguna darsaya sida lugaha Baranbaradu u samaysan yihiin iyo miisaanka ay ku taagan yihiin si ay wax uga bartaan.
Waxa soo akhriyay laba warbixin oo laga qorey Baranbarada Rashiid Ceelaanyo